जुन बर्थस्टोन एलेक्जान्ड्राइट र मूनस्टोन नयाँ अपडेट २०२१
पर्ल, alexandrite र moonstone जुन ढु stone्गाको र of्गको पुरानो र आधुनिक दुबै सूचीको अनुसार जूनका लागि जन्मस्थानहरू हुन्। जुन बर्थस्टोन रिंग वा नेकलेस गहनाका लागि उत्तम रत्न।
जुनको बर्थस्टोनको अर्थ के हो?
एउटा जन्मस्टोन एउटा मणि हो जुन जुन महिनाको जन्म महिनासँग सम्बन्धित छ: पर्ल, alexandrite र moonstone। जुन बर्थस्टोन रिंग वा हारको लागि उत्तम रत्न
जुनको बर्थस्टोन रंग के हो?
जुनको बर्थस्टोन कहाँ पाइन्छ?
जुन बर्थस्टोन गहना के हो?
जुनको बर्थस्टोन कहाँ भेट्टाउने?
जुनको जन्मकुण्डलीका राशिफलहरू के हुन्?
A मोती एक कडा, चमकदार वस्तु हो जसलाई जीवित शेलिंग मोल्स्क र अन्य जनावरहरूको कोमल ऊतक भित्र उत्पादन गरिन्छ। एक मोलस्कको खोल जस्तै, क मोती मिनेट क्रिस्टलीय फारममा क्याल्शियम कार्बोनेट मिलेर बनेको छ, जुन गाभ्ने तहहरूमा जम्मा भएको छ। आदर्श मोती पूरै गोलो र चिल्लो हो, तर धेरै अन्य आकारहरू, बारोक मोतीको रूपमा चिनिन्छ, हुन सक्छ। प्राकृतिक मोतीहरूको उत्कृष्ट गुणलाई धेरै शताब्दीहरूसम्म रत्न र सौन्दर्यको वस्तुहरूको रूपमा उच्च मान दिइन्छ। यसको कारणले, मोती कुनै दुर्लभ, उत्तम, प्रशंसनीय र मूल्यवान चीजको लागि रूपक बन्न पुगेको छ।
यो alexandrite विविधताले परिवेशको प्रकाशको प्रकृतिमा निर्भर रंग परिवर्तन गर्दछ। Alexandrite क्रिस्टल संरचनामा क्रोमियम आयनहरू द्वारा अल्युमिनियमको सानो स्तरको प्रतिस्थापनबाट परिणामहरू, जुन दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रमको पहेलो क्षेत्रमा तरंगदैर्ध्यको एक साँघुरो दायरामा प्रकाशको गहन अवशोषण गर्दछ। किनभने मानवीय दृष्टि हरियो बत्तीको लागि सबैभन्दा बढी संवेदनशील छ र रातो बत्तीको लागि कम सेन्सिटिभ छ, alexandrite डेलाइटमा हरियो हरियो देखिन्छ जहाँ दृश्य प्रकाशको पूर्ण स्पेक्ट्रम अवस्थित हुन्छ, र गरमा inc प्रकाशमा रातो रातो हुन्छ जसले कम हरियो र निलो स्पेक्ट्रम उत्सर्जन गर्दछ।
Moonstone Feldspar समूह को एक सोडियम पोटेशियम एल्युमिनियम सिलिकेट हो कि एक मोती र opalescent schiller प्रदर्शन गर्दछ। It प्राचीन सभ्यतालगायत सहस्राब्दीका लागि गहनाहरूमा प्रयोग गरिएको छ। रोमीहरूले प्रशंसा गरे moonstone, उनीहरूले विश्वास गरे कि यो चन्द्रमाको ठोस किरणहरूबाट उत्पन्न भएको हो। दुबै रोमी र ग्रीकहरू सम्बन्धित थिए moonstone तिनीहरूका चन्द्र देवताहरूको साथ। हालसालैको इतिहासमा, मूनस्टोन आर्ट नोव्यू अवधिमा लोकप्रिय भयो।
जुनको बर्थस्टोन अप्सलेटबाट दायरा हुन्छ मोती दुधमा moonstone दुर्लभ, रंग परिवर्तन गर्न alexandrite। मूल्य बिन्दु र रंग विकल्पहरूको यस स्पेक्ट्रमको साथ, जुन जन्मदिनको साथ व्यक्तिहरूले कुनै पनि मूड वा बजेट फिट गर्नको लागि एक सुन्दर जून रत्न चुन्न सक्छन्।
प्राय: ताजा पानीका मोतीहरू चीनबाट आएका हुन्। मुख्य समुद्र मोती फार्महरू जापान, थाईल्याण्ड, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स र पोलिनेसियामा अवस्थित छन्।
अलेक्सान्ड्राइटको पहिलो ज्ञात भण्डारहरू रसियामा भएको छ। यो श्रील Lanka्का, ब्राजील, तञ्जानिया, मोजाम्बिक, मडागास्कर र भारतमा हालै पत्ता लागेको थियो।
श्रीलंका विश्वको उत्तम गुणको मूनस्टोनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। ब्राजिल, म्यानमार र भारतमा मूनस्टोन पनि पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुन्छ। सानो मात्रा विश्वका अन्य धेरै देशहरूमा पाइन्छन्।
बर्थस्टोन गहनाहरू बनेको छ मोती, alexandrite र moonstone। हामी जून बर्थस्टोन गहनाको घण्टी, ब्रेसलेट, झुम्का, हार र अन्य धेरै बेच्दछौं।
त्यहाँ राम्रो छ मोती, alexandrite र moonstone हाम्रो पसलमा बिक्रीको लागि
पर्ल पूर्णता र अविहीनताको प्रतीक हो। यो लामो जीवन र उर्वराको प्रतीक हो, र यसको चमकको कारण यसलाई प्रायः चन्द्र प्रतीक मानिन्छ। ऑयस्टर शेल भित्र गाडिएको, मोती लुकेको ज्ञान प्रतिनिधित्व गर्दछ, र यो अत्यधिक स्त्री हो।
Alexandrite जुन पत्थरले भाग्य, राम्रो भाग्य र प्रेम ल्याउँछ। रसियामा, यो धेरै राम्रो शगुनको जुन रत्न मानिन्छ। यो शारीरिक प्रकट संसार र अप्रमाणित आध्यात्मिक, वा सूक्ष्म संसार बीचको अन्तरक्रियामा सन्तुलन ल्याउने विश्वास गरिन्छ।
च्यानल आशा, संवेदनशीलता, र लगाएर प्रशस्तता moonstone। मुकुट चक्र र दिव्य स्त्री ऊर्जा संग सम्बद्ध, यो इंद्रधनुषी रत्न को लागी सहज र मानसिक क्षमताहरु लाई प्रेरणा दिन्छ।
मिथुन र कर्क ढु stones्गा दुबै जून ढु stone्गा हुन्।
जे मिथुन र क्यान्सर तपाई जे भए पनि। पर्ल, alexandrite र moonstone जुन १ देखि 1० सम्मको ढु stone्गा हुन्।
जुन 1 मिथुन पर्ल, alexandrite र moonstone
जुन2मिथुन पर्ल, alexandrite र moonstone
जुन3मिथुन पर्ल, alexandrite र moonstone
जुन4मिथुन पर्ल, alexandrite र moonstone
जुन5मिथुन पर्ल, alexandrite र moonstone
जुन6मिथुन पर्ल, alexandrite र moonstone
जुन7मिथुन पर्ल, alexandrite र moonstone
जुन 8 मिथुन पर्ल, alexandrite र moonstone
जुन9मिथुन पर्ल, alexandrite र moonstone
जुन 10 मिथुन पर्ल, alexandrite र moonstone
जुन 11 मिथुन पर्ल, alexandrite र moonstone
जुन 12 मिथुन पर्ल, alexandrite र moonstone
जुन 13 मिथुन पर्ल, alexandrite र moonstone
जुन 14 मिथुन पर्ल, alexandrite र moonstone
जुन 15 मिथुन पर्ल, alexandrite र moonstone
जुन 16 मिथुन पर्ल, alexandrite र moonstone
जुन 17 मिथुन पर्ल, alexandrite र moonstone
जुन 18 मिथुन पर्ल, alexandrite र moonstone
जुन 19 मिथुन पर्ल, alexandrite र moonstone
जुन 20 मिथुन पर्ल, alexandrite र moonstone
जुन 21 मिथुन पर्ल, alexandrite र moonstone
जुन 22 क्यान्सर पर्ल, alexandrite र moonstone
जुन 23 क्यान्सर पर्ल, alexandrite र moonstone
जुन 24 क्यान्सर पर्ल, alexandrite र moonstone
जुन 25 क्यान्सर पर्ल, alexandrite र moonstone
जुन 26 क्यान्सर पर्ल, alexandrite र moonstone
जुन 27 क्यान्सर पर्ल, alexandrite र moonstone
जुन 28 क्यान्सर पर्ल, alexandrite र moonstone
जुन 29 क्यान्सर पर्ल, alexandrite र moonstone
जुन 30 क्यान्सर पर्ल, alexandrite र moonstone
प्राकृतिक जून बर्थस्टोन हाम्रो मणि पसलमा बिक्रीको लागि
सगाई रिंगहरू, नेकलेसहरू, स्टड इयररिंगहरू, ब्रेसलेटहरू, पेंडन्टहरू ... को रूपमा हामी अनुकूलित जून बर्थस्टोन गहना बनाउँदछौं। हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस उद्धरण को लागी।